Nanamarika fiafaran’ny vanim-potoana iray ao Japan ihany koa ny faran’ny taona 2018 · Global Voices teny Malagasy
Nanamarika fiafaran'ny vanim-potoana iray ao Japan ihany koa ny faran'ny taona 2018
Voadika ny 02 Janoary 2019 7:19 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Español, русский, Italiano, українська, English
Ny Amperora Akihito sy ny fianakaviany nanao ny fivoahany ho hitam-bahoaka taona 2018 farany tamin'ny 23 Desambra. Pikantsary avy amin'ny pejy ofisialy YouTube.
Nanamarika fiafaran'ny vanim-potoana iray any Japan ihany koa ny 31 Desambra 2018 raha nanamarika ny fiarahana mankalaza Taombaovao amin'ny fitondram-panjaka nentin'ny Amperora Akihito ny firenena.
Nanambara ny amperora Japoney tamin'ny taona 2016 fa hiala eo amin'ny seza fiketrahan'ny mpanjaka izy amin'ny 30 avrily 2019, hodimbiasin'ny printsy mitazona ny satro-boninahitra Naruhito, ka hanakatona ny 30 taonan'ny vanim-potoana Heisei ao Japan. Ho an'ny vahoaka japoney, ny taona 2018 no taonan'ny Heisei saigo (平成最後), “ny fotoana farany hanaovantsika izany amin'ny vanim-potoana Heisei” — indrindra fa amin'ny lanonana faran'ny taona sy taombaovao.
Nanao ny kabariny farany taona 2018 ny Amperora tamin'ny andro nitsingerenan'ny fahaterahany tamin'ny 23 desambra, izay nilazany ny fanantenany hisian'ny fandriampahalemana ho an'i Japan rahatrizay. Nasongadiny ihany koa ny mbola izakàn'ny vahoakan'i Okinawa hatramin'ny taona 2018 ny vokatry ny Adin'i (riaka) Pasifika izay niafara tamin'ny faharesena tamin'ny taona 1945, lohahevitra mahazatra nandritra ny 30 taona nanjakàny maharitra.
Tsingerintaona faha-85 an'ny Amperora Akihito androany (23 Desambra 2018). Ity no aniversera farany amin'ny maha-Amperoran'i Japan azy. ‘Tiako ny hisaotra hatrany amin'ny foko lalina any ireo vahoaka maro nanaiky sy nanohy tamin'ny fanohanana ahy,’ hoy ny nambaran'ny Amperora tao anatin'ny feo mifokofoko, izay nanohy ny fiarahabana aniversera tamin'ny firariana fandriampahalemana (rahatrizay).
“Nanome fampiononana lalina ho ahy ny fanatonan'ny fiafaran'ny Vanim-potoana Heisei, tsy misy ady eto Japan,” hoy ny amperora tao amin'ny fanamarihana nataony.
Zavadehibe ny tsy manadino fa aina tsy hita isa no foy tamin'ny ady lehibe faharoa ary ny fandriampahalemana sy ny firoboroboan'i Japan taorian'ny ady dia naorina tambonin'ny sorona maro sy ny ezaka tsy mety sasatra nataon'ny vahoaka japoney, ary nampita izany tantara izany araka izay mety ho an'ireo teraka taorian'ny ady.
Nanomboka tamin'ny 8 janoary 1989 izany ny Vanimpotoana Heisei tao Japan, rehefa napetraka tamin'ny fomba manetriketrika ho eo an-dohan'ny Amperora Akihito ny satro-boninahitra maha-mpanjaka ny ampitson'ny nahafatesan'ny rainy, ny Amperora Hirohito, fantatra taorian'ny fahafatesany ho Showa Amperora (昭和天皇).
Fantatra ho sarotra na dia nandry fahalemana aza ho an'ny firenena ny vanimpotoana Heisei ao Japan. Ny vanim-potoana Shōwa teo aloha no nahitana fitondran-jiolahy izay nitarika an'i Japan ho any amin'ny fahafatesana tanteraka nandritra ny Ady Lehibe Faharoa taorian'ny niainany daroka baomba, fanafihana tamin'ny baomba atomika, fahafatesam-bahoaka tamin'ny hanoanana, ary nanaraka izany rehetra izany ny fahagagàna ara-toekarena sy ny fanambinana taorian'ny ady. Mifanohitra amin'izany, nilamina ny vanim-potoana Heisei, raha indraindray nisy ny fikorontanana ara-toekarena taorian'ny faharavan'ny tapoaka ara-toekarena tamin'ny taompolo 80.
Mbola manana anjara toerana lehibe ao amin'ny kolontsaina japoney ny vanim-potoana Imperialy. Raha ampiasaina ao Japan ny kalandrie Gregoriana, ny ankamaroan'ny dosie ofisialy toy ny fanambaràn'ny banky, ny tapakilam-pividianana entana ary ny pasipaoro kosa manondro ny taona araka ny vanimpotoana imperialy. Ohatra, ny taona 1989 matetika fantatra ho “Heisei 1″ ao Japan, raha tondroina ho “Heisei 30″ ny taona 2018.
Hanamarihana ny mamimangidin'ny fiafaran'ny vanim-potoana iray, nampiasaina nandritra ny taona 2018 ny farangonteny Twitter #Heisei saigo (#平成最後, izay azo ambara ankapobeny hoe, “ny fotoana farany anaovanay izao amin'ny vanimpotoana Heisei”).
Talohalohan'izany tamin'io taona io ny farangonteny #平成最後の夏 (ny asara [andro mafana] Heisei farany) no niraisana nampiasaina tao amin'ny Twitter:
Amin'izao asara farany amin'ny vanimpotoana Heisei izao aho no nahazo sipa. Manantena aho haharitra hatramin'ny fanombohan'ny asara manaraka izao fifandraisanay izao. Ho antsoinay izany hoe “fitiavana niampita tantara”
Rehefa nihananatona ny faran'ny taona 2018, maro ireo olona nieritreritra ny fomba hanamarihana ny fetin'ny faran'ny taona amin'ny 31 desambra, iray amin'ny fety lehibe indrindra ao anatin'ny taona ao Japan — ny fankalazana ny Taombaovao izay manomboka ny 31 Desambra ka hatramin'ny 3 Janoary.
Mikatona ny firenena rehefa mody any an-tanindrazana avy any an-tanandehibe ny fianakaviana maro handany ny fotoana hiaraka amin'ny havana. Ho an'ny maro ny volana desambra dia midika ho fiezahana mafy ho vonona amin'ny fety amin'ny alalan'ny fahandroana sakafo, fanadiovana sy fanariana ny zava-drehetra any amin'ny tsy hita maso any amin'ny 31 Desambra mba hampadio ny fanombohan'ny Taombaovao amin'ny voalohany Janoary.
Vokatr'izany dia lasa fironana tao amin'ny Twitter ny farangoteny “fanadiovana lehibe farany amin'ny vanimpotoana Heisei” (#平成最後の大掃除) tamin'ny volana desambra:
— Yuuki ? (@ore_english) December 25, 2018
Enina andro monja tamin'ity taona ity, nalaza ny #平成最後の大掃除 (fanadiovana farany amin'ny vanimpotoana Heisei). Midika izany hoe fanamarinana farany amin'izay tokony atao amin'ny taona 2018 sy fanontaniana hoe “lazao anay izay tsy tianao ho tsy vita na izay tianao ho vita”. Te-hihinana yakiniku aho farafahakeliny indray mandeha. (Ararobia) 26 des izao.
Ny fiandrasana ny taombaovao moa dia fantatra hoe Omisoka (大みそか) amin'ny teny Japoney. Manazava ny fianvian'ny voambolana i Choukanne, biby famantarana amin'ny fomba ofisialy ny gazety Tokyo Shimbun:
Androany (31 Desambra 2018) no andro farany amin'ny taona 2018. Ity ihany koa no Omisoka (fiandrasana ny taombaovao) farany amin'ny vanimpotoana Heisei. Ny tarehintsorana shinoa manondro ny misoka dia nosoratana tamin'ny voalohany ho “三十日” (mi-so-ka, 3-10-andro), saingy tsy misy idiran'ny datinandro io, fa midika fotsiny hoe faran'ny volana.
Rehefa vita tanteraka ny fanadiovana sy ny fahandroantsakafo ary tonga ny havana, maro ireo fianakaviana no mandany ny fiandrasana ny taombaovao amin'ny fijerena ny fifaninanankira mena sy fotsy fanao isan-taona (紅白歌合戦), fantara amin'ny hoe Kohaku. Raha efa mihalefy aza ny lazan'io fandaharana io tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia afa-nandresy kintan'ny hira toa an'i Keisuke Kuwata, ilay mpitarika ao amin'ny vondrona mpihira malaza ‘Southern All Stars’ izay manatontosa fampisehoana fiandrasana ny Taombaovao ao Yokohama, hiseho mandritra ny fandaharana ny mpikarakara ny fandefasana ny Kohaku farany amin'ny vanimpotoana Heisei.
Nandritra ny Kohaku, niara-nihira tamin'i Matsutoya Yumi i Kuwata Keisuke avy ao amin'ny Kintan'ny Tatsimo Rehetra.
Hita ho nanana ny akony teo amin'ny endriny ny fandaharana Kohaku farany amin'ny vanimpotoana Heisei tamin'io taona 2018 io:
— Peter Payne (@JListPeter) December 31 , 2018
Ny farany amin'ny vanimpotoana Heisei no tsara indrindra tao anatin'ny taona maromaro. Samy nihira tao i Matsutoya Yumi (izay nanao ny hiran'i Kiki ao amin'i Delivery Service) sy i Kuwata Keisuke (ilay zalahy nanoratra ny Elly My Love ho an'i Ray Charles)